3000 soomaali ah oo sanadkii hore qaadatay jinsiyada Norway. - NorSom News
Sida ay sheegtay hey´adda socdaalka iyo jinsiyadaha Norway, waxaa sanadkii hore jinsiyada Norway qaatay dad gaaraya 13.200 qof, iyada 90% dadka codsaday dhalashada Norway ay jawaabta “Positiv ah” ka heleen codsigooda.
Soomaalida ayaa mar kale sanadkan noqotay dadka ugu badan ee ajaaniibta ah ee qaatay dhalashada Norway. Waxaana sanadkii hore jinsiyada Norway qaatay dad soomaali ah oo kor u dhaafaya 3000 qof, sida ay sheegtay hey´addaha jinsiyadaha iyo qoxootiga.
Waxaa soomaalida kusoo xigo dadka kasoo jeedo dalka Ereteriya, waxaana sanadkii hore jinsiyada Norway qaatay 1600 qof oo Ereteriyaan ah.
xigasho/kilde-:Somaliske borgere topper fjorårets liste med 3.000 innvilgede statsborgerskap.
Previous articleHooyadan soomaalida ah oo 10 sano kadib Norway ka heshay magangalyo.
Next articleGermany: Nin toogtay lix qof oo qoyskiisa ka tirsan oo ay waalidkiisa ka mid yihiin